Dalxiiska caalamiga ah ayaa hoos udhacay 83% rubuca koowaad ee 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dalxiiska caalamiga ah ayaa hoos udhacay 83% rubuca koowaad ee 2021
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tallaalada waxaa loo arkaa inay fure u yihiin soo kabashada warshadaha dalxiiska adduunka ee COVID-19 ee safka faafa.
Aasiya iyo Baasifigga ayaa sii waday dhibaatada ugu yar ee howlaha dalxiis ee caalamiga ah
Yurub ayaa diiwaangalisay hoos u dhacii labaad ee ugu weynaa ee dalxiis caalami ah iyadoo -83%
Rajada soo kabashada safarka ee caalamiga ah ee bilaha Maajo-Ogosto oo xoogaa soo hagaageysa
Intii u dhaxeysay Janaayo iyo Maarso 2021 meelaha loo safrayo adduunka oo dhan waxay soo dhoweeyeen 180 milyan oo ka yar soo-galootiga caalamiga ah marka loo barbardhigo rubacii koowaad ee sanadkii hore.
Aasiya iyo Baasifigga waxay sii wadeen dhibaatooyinka ugu hooseeya ee dhaqdhaqaaqa iyadoo 94% hoos u dhac ku yimid soogalootiga caalamiga ah muddada saddexda bilood ah.
Yurub ayaa diiwaan gelisay hoos u dhacii labaad ee ugu weynaa iyadoo -83%, waxaa ku xigay Afrika (-81%), Bariga Dhexe (-78%) iyo Ameerika (-71%).
Dhammaan tani waxay daba socotaa laga soo bilaabo 73% hoos u dhac ku yimid adduunka oo dhan soo-galootiga dalxiis ee la diiwaan-galiyay sannadka 2020, taasoo ka dhigaysa sanadkii ugu xumaa ee qaybtaas la diiwaan-geliyo.
Sahankii ugu dambeeyay wuxuu muujinayaa rajada laga qabo mudada bilaha XNUMXaad-XNUMXaad inay waxoogaa hagaagto. Intaas waxaa sii dheer, xawaaraha tallaalka dib-u-soo-celinta ee suuqyada muhiimka ah ee suuqyada qaarkood iyo sidoo kale siyaasadaha dib loogu bilaabayo dalxiiska si nabadgelyo leh, oo ay ugu weyn tahay EU Digital Green Certificate, ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in dib loogu soo laabto qaar ka mid ah suuqyadan.
Guud ahaan, 60% waxay filayaan in dib loogu soo celiyo dalxiiskii caalamiga ahaa kaliya sanadka 2022, halka 50% ay aheyd sahankii Janaayo 2021. Inta soo hartay 40% waxay u aragtaa soo kabasho suurtagal ah sanadka 2021, in kastoo tani ay waxyar ka yartahay boqolkiiba bishii Janaayo
Ku dhowaad kala bar khubarada ma arkaan dib ugu laabashada heerarka dalxiiska caalamiga ah ee 2019 ka hor 2024 ama ka dib, halka boqolkiiba jawaabeyaasha tilmaamaya dib ugu soo laabashada heerarka cudurrada faafa ee 2023 ay xoogaa hoos u dhacday (37%), marka la barbardhigo sahankii bishii Janaayo.
Khubarada dalxiiska ayaa tilmaamaya sii socoshada xayiraadaha safarka iyo isku xirnaasho la'aanta safarada iyo borotokoollada caafimaadka oo ah caqabada ugu weyn ee dib u soo kabashada waaxda.
Saameynta COVID-19 ee dalxiisku wuxuu yareeyaa dhoofinta adduunka 4%
Dhibaatada dhaqaale ee cudurka faafa sidoo kale waa mid aad u kacsan. Rasiidhada caalamiga ah ee dalxiiska ee sannadka 2020 ayaa hoos u dhacay 64% marka loo eego dhabta (lacagaha maxalliga ah, qiimaha joogtada ah), oo u dhiganta hoos u dhac ka badan US $ 900 bilyan, taasoo jareysa guud ahaan qiimaha dhoofinta adduunka oo dhan in ka badan 4% sannadka 2020. Wadarta khasaaraha ka soo gala dakhliga dhoofinta ka imanaya dalxiiska caalamiga ah (oo ay ku jiraan gaadiidka rakaabka) waxay gaarayaan ku dhowaad US $ 1.1 trillion. Aasiya iyo Baasifigga (-70% marka loo eego dhab ahaan) iyo Bariga Dhexe (-69%) waxay arkeen dhibcaha ugu badan ee rasiidhada.
soo galootiga caalamiga ah